iTunes iyo AirPlay 2 waxay la jaan qaadi doonaan Samsung TVs | Waxaan ka socdaa mac
iTunes iyo AirPlay 2 waxay la jaan qaadi doonaan Samsung TVs
Tani waa mid ka mid ah wararkaas layaabka leh ee soo maray iyo imminka shirkadaha Apple iyo Samsung. Xaaladdan oo kale, waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay maaddaama cinwaanka maqaalkani leeyahay iTunes waxaa lagu dhejin karaa Samsung Smart TVs si aad ugu raaxaysato waxyaabaha ku jira Filimmada iTunes iyo Bandhigyada TV-yada ee telefishannadan, taas oo ah, silsilado, filimo, iwm.
Marka lagu daro ikhtiyaarka lagu rakibo iTunes, dhammaan Samsung smart TV-yada la sii daayay 2018 sidoo kale noqon doonaa la jaan qaadayaan AirPlay 2. Warkan waxaan la soconeynaa isweydiin intee le'eg ayey Apple ku qaadan doontaa inuu tan u furo shirkado kale oo ka baxsan Samsung iyo su'aasha ugu muhiimsan, aaway Apple TV oo leh warkan?
Dhamaan Samsung TV-yada la sii daayay laga bilaabo 2018 wixii ka dambeeyay
Waxayna umuuqataa in dhammaan telefishannada cusub ee sumadda Kuuriyada Koonfureed ee la bilaabay isla sanadkaan 2019 waxay horey u lahaan lahaayeen barnaamijka Apple iyo awoodda loo adeegsado AirPlay 2 dushooda. Moodooyinka 2018, cusbooneysiin fog ayaa la sameyn doonaa taas oo ku dari doonta awoodda isticmaalka fursadahaan.
Kani waa hordhaca adeegga maqalka ee maqalka ee Applevis. Haa, waa wax aan dhammaanteen maskaxda ku hayno in aakhirka dhici doono laakiin xilligan la joogo ma hayno xog la taaban karo oo ku saabsan adeeggan, oo noqon lahayd tartan toos ah oo ka socda HBO, Netflix, Hulu iyo adeegyo kale La mid ah.
Dhinaca kale, "qaybta taban" waa ta Apple TV ay tahay inay mar labaad noolaato, taas oo si kama 'ah looga tegayo meel kasta oo tixraac ah markay shirkaddu aqbasho in filimka iyo buugga telefishanka laga arki karo telefishannadan ee Samsung iyo hubaal qalab kale goor dhow. Waan arki doonnaa waxa ku dhacaya sanduuqa sare ee shirkadda (haddii ay ku dhammaato in la waayo ama si fudud loogu ekaado xarunta HomeKit) iyo sida ay isticmaaleyaashu uga falceliyaan warkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » iTunes iyo AirPlay 2 waxay la jaan qaadi doonaan Samsung TVs
Apple wuxuu xirayaa Apple Store kii ugu yareeyay Japan mudo 13 sano kadib
Pandora wuxuu bilaabay codsi loogu talagalay Apple Watch